एसाइलम गर्नेहरुलाई खुशीको खबर, न्युयोर्कमा घट्यो ब्याकलग – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१६ चैत्र २०७६, आईतवार २२:११ English
एसाइलम गर्नेहरुलाई खुशीको खबर, न्युयोर्कमा घट्यो ब्याकलग
किशोर पन्थी, न्युयोर्क, १२ फागुन । अब अमेरिकामा शरणार्थी बनेर बस्नका लागि एसाइलम आवेदन दिनेहरुले पहिले जस्तो प्रारम्भिक अन्तरवार्ताकै लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । गतवर्षदेखि अमेरिकी सरकारको होमल्याण्ड सेक्युरिटी अन्तरगत युएससीआईएसको एसाइलम डिभिजनले अन्तरवार्ताको मिति तय गर्नका लागि नयाँ विधि अपनाउन थाले लगत्तै एसाइलमको प्रारम्भिक अन्तरवार्ताका लागि ब्याकलग पनि स्वाठ्ठै घटेको छ । सन् २०१५ को जनवरी भन्दा अगाडिसम्म एसाइलम अन्तरवार्ताका लागि कम्प्युटरले रयाण्डम छनौट गर्ने विधि अपनाइएकाले कैयन पुराना आवेदकहरुले वर्षौसम्म पनि अन्तरवार्ताको मिति पाएका थिएनन् । अढाईवर्षभन्दा लामो समयदेखि अन्तरवार्ताको मिति नपाएका नेपालीहरुको संख्या न्युयोर्कमा पनि उल्लेख्य रहेको थियो । तर अब भने पहिले आवेदन दिनेहरुलाई अन्तरवार्ताका लागि पहिले बोलाउन थालिएकाले न्युयोर्कमा एसाइलमको आवेदन दिनेहरुले डेढ वर्षमा नै प्रारम्भिक अन्तरवार्ताको मिति पाउन थालेका छन् ।
धेरै कुराहरु भाग्यमा भरोसा गर्नुपर्ने अमेरिकी अध्यागमनमा गतवर्षसम्म एसाइएलमको अन्तरवार्ता छिटो पाउनका लागि पनि भाग्यमा नै भरोसा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । गतवर्षदेखि अपनाइएको नयाँ प्रकृयापछि सुरुमा न्युयोर्कमा एसाइलमका लागि अन्तरवार्ताको मिति पाउन अढाईवर्षसम्म लाग्ने गरेकोमा नयाँ प्रणाली अपनाइएको एकवर्षमा नै पुरानो ब्याकलग स्वाठ्ठै घटेर डेढवर्षमा झर्दा आवेदकहरुलाई तुलनात्मक रुपमा केही सहज अवस्था आएको छ । यही अनुपात कायम रहेमा अबको केहीमहिनाभित्रमा नै एसाइलमका लागि आवेदन दिनेहरुले एकवर्षभित्रै अन्तरवार्ताको मिति पाउने र आफ्नो आवेदनबारे युएससीआईएसबाट फैसला पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यो बाहेक अन्तरवार्ताका लागि मिति तय भइसकेको तर आवेदकको अनुरोध र युएससीआईएसको आवश्यकताका कारण पुन अर्को मिति तोक्नुपरेको खण्डमा त्यस्ता आवेदकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर तुरुन्तै अन्तरवार्ताका लागि बोलाउने गरिएको छ । त्यो बाहेक बच्चाबच्चीहरुले एसाइलमको आवेदन दिएको भएमा त्यस्ता आवेदकहरुलाई दोश्रो प्राथमिकता दिएर अन्तरवार्ताका लागि बोलाउन थालिएको छ । त्यो बाहेक सबैभन्दा पुरानो मितिमा एसाइलमको आवेदन दिएकाहरुलाई अहिले तेश्रो प्राथमिकतामा राखेर अन्तरवार्ताका लागि बोलाउन थालिएको छ । पुरानो मितिमा एसाइलमको आवेदन दिएकाहरुले पीडित बन्दै अन्तरवार्ताको मिति कम्प्युटरले कहिले छनौट गर्ला भनेर आशैआशामा बस्नुपर्ने बाध्यता अब छैन ।
कस्को अन्तरवार्ता भइसक्यो ?
गत जुलाईमा न्युयोर्कमा सन् २०१३ को जुलाई ताका एसाइलमको आवेदन दिनेहरुले अन्तरवार्ताको मिति पाएका थिए । अर्थात् सन् २०१३ को जुलाईमा आवेदन दिनेहरुको अन्तरवार्ता युएससीआईएसले गत जुलाईमा गरेको थियो । सन् २०१५ को जनवरीसम्म साढे २ वर्षसम्म अन्तरवार्ताका लागि कुर्नुपर्ने बाध्यता गत जुलाईमा आइपुग्दासम्म दुईवर्षमा झरेको थियो । तर अहिले भने त्यो समय अझ घटेर डेढवर्षमा झरको छ । सन् २०१४ को जुनमा एसाइलमका लागि आवेदन दिनेहरुको अन्तरवार्ता न्युयोर्कको एसाइलम अफिसले सन् २०१६ को जनवरीमा गरिसकेको छ । त्यसअगाडि सन् २०१४ को मेमा आवेदन दिएकाहरुको अन्तरवार्ता सन् २०१५ को नोभेम्बरमा भइसकेको छ । सन् २०१४ को जुलाई र अगस्तमा एसाइलमका लागि आवेदन दिएकाहरुले आफ्नो अन्तरवार्ता सन् २०१६ को फरबरी र मार्चमा अपेक्षा गर्न सक्ने युएससीआईएसले जनाएको छ । युएससीआईएसबाटै एसाइलमको आवेदन स्वीकृत हुनेहरुले अब आवेदन दिएको तीनवर्षभित्रै ग्रिनकार्ड पाइसक्ने भएका छन् ।
अन्य क्षेत्रमा कस्तो छ ?
अहिले विभिन्न आठवटा न्यायिक अधिकारक्षेत्रभित्र एसाइलमका अन्तरवार्ताहरु व्यवस्थीत तरिकाले प्राथमिकतामा आधारमा तय गर्न थालिएको छ । यी न्यायिक अधिकारक्षेत्रमा पहिले आवेदन दिनेहरुले पहिले अन्तरवर्ताको मिति पाउने गरेका छन् । आर्लिङटन भर्जिनिया, शिकागो इलिनोय, ह्युस्टन टेक्सास, लस एन्जलस क्यालिफोर्निया, मायामी फ्लोरिडा, नेवार्क न्युजर्सी, न्युयोर्क र सानफ्रान्सिस्को क्यालिफोर्नियाको एसाइएलम कार्यालयको न्यायिक अधिकारक्षेत्रभित्र एसाइलमका अन्तरवार्ता व्यवस्थीत गरिएको छ ।
आर्लिङटन भर्जिनियामा कुनै एसाइलम आवेदकले सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा एसाइलमका लागि आवेदन दिएको छ भने उसको अन्तरवार्ता सन् २०१६ को जनवरीमा भइसकेको छ । अर्थात् आवेदन दिएको २८ महिनामा आवेदकले अन्तरवार्ताको मिति पाएका छन् । आर्लिङटन भर्जिनियामामा ६ महिनाअगाडिसम्म पनि सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा आवेदन दिनेहरुकै अन्तरवार्ता भइरहेको थियो, अहिले पनि सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा नै आवेदन दिनेहरुको अन्तरवार्ता भइरहेको छ । ब्याकलग कायम रहँदा भर्जिनियाको न्यायिक क्षेत्रभित्र पर्ने आवेदकहरु मारमा परिरहेका छन् । आर्लिङटनको न्यायिक अधिकार क्षेत्रभित्र अलाबामा, वासिंटन डिसी, जर्जिया, मेरिल्याण्ड, नर्थ क्यारोलिना, पेन्सिलभेनियाको पिट्सबर्ग, साउथ क्यारोलिना, भर्जिनिया र वेष्ट भर्जिनिया पर्दछन् ।
त्यस्तै इलिनोयको शिकागोमा पनि सन् २०१३ को मेमा एसाइलमका लागि आवेदन दिनेहरुको अन्तरवार्ता अहिले भइरहेको छ । त्यहाँ ६ महिना अगाडिसम्म पनि सन् २०१३ को मेमा एसाइलमको आवेदन दिनेहरुको अन्तरवार्ता भइरहेको थियो । सन् २०१३ को मे पछि एसाइलमको आवेदन दिनेहरुले ३२ महिनासम्म पनि अन्तरवार्ता नपाउँदा यस क्षेत्रका आवेदकहरु पनि मारमा परिरहेका छन् । शिकागोको न्यायिक क्षेत्रभित्र आइडाहो, इलिनोय, इन्डियाना, आयोवा, कन्सास, केन्टकी, मिसिगन, मिनासोटा, मिजौरी, मोन्टाना, नेब्रास्का, नर्थ डाकोटा, ओहियो, साउथ डाकोटा, विस्कन्सिन पर्छन् ।
त्यसैगरी टेक्सासको ह्युस्टनमा कुनै एसाइलम आवेदकले सन् २०१४ को अप्रिल र मेमा एसाइलमका लागि आवेदन दिएको भएमा उनीहरुको अन्तरवार्ता अहिले भइरहेको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा ह्युस्टनमा छिटो अन्तरवार्ताको मिति दिने क्षेत्रका रुपमा परिचित टेक्सासमा ६ महिना अगाडिसम्म पनि २०१४ को अप्रिलमा आवेदन दिनेहरुको अन्तरवार्ता भइरहेको थियो । त्यसैले टेक्सासमा एसाइलमका लागि आवेदन दिएमा छिटो अन्तरवार्ताको मिति पाइन्छ भन्ने अवधारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने भइसकेको छ । हयुस्टनको न्यायिक क्षेत्रभित्र अर्कान्सास, कोलोराडो, लुजियाना, मिसिसिपी, न्यु मेक्सिको, ओक्लाहोमा, टेनिसी, युटाह, वायोमिंग पर्दछन् ।
क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलस क्षेत्रको अवस्था निकै दर्दनाक रहेको छ । ६ महिना अगाडिसम्म पनि सन् २०११ को अगस्तमा नै आवेदन दिनेहरुको अन्तरवार्ता भइरहेको थियो भने अहिले पनि सन् २०११ को अगस्तमा नै आवेदन दिनेहरुको अन्तरवार्ता भइरहेको छ । यस क्षेत्रका आवेदकहरुले युएससीआईएसको अन्तरवार्ता पाउनमात्र पनि झण्डै साढे ४ वर्ष कुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । सम्पूर्ण अमेरिकामा नै सबैभन्दा ढिलो अन्तरवार्ताको मिति पाइने क्षेत्र लस एन्जलस रहेको छ । सन् २०११ को सेप्टेम्बरपछि एसाइलमका लागि आवेदन दिनेहरुले त अन्तरवार्ताको मिति पाइरहेका छैनन् भने अहिले आवेदन दिनेहरुले कहिले मिति पाउने हुन्, अनुमान गर्न समेत मुस्किल छ । लस एन्जलस न्यायिक क्षेत्रभित्र एरिजोना, साउथ क्यालिफोर्निया, गुआम, हवाई र नेभाडाको लस भेगास पर्दछन् ।
तर क्यालिफोर्नियाको सान फ्रान्सिस्कोमा भने लस एन्जलसमा जस्तो छैन । सान फ्रान्सिस्कोमा सन् २०१४ को जनवरीमा एसाइलमको आवेदन दिएकाहरुको अन्तरवार्ता गत महिना अर्थात् सन् २०१६ को जनवरीमा भइसकेको छ । सान फ्रान्सिस्कोमा आवेदन दिएको २ वर्षमा नै एसाइलम अन्तरवार्ता हुने गरेको छ । सान फ्रान्सिस्कोको न्यायिक क्षेत्रभित्र अलास्का, नर्दन क्यालिफोर्निया, नेभाडाको रेनो , ओरेगन र वासिंटन पर्दछन् ।
त्यस्तै न्युजर्सीको नेवार्कमा सन् २०१३ को जुनमा एसाइलमका लागि आवेदन दिनेहरुको अन्तरवार्ता अहिले भइरहेको छ । न्युयोर्कमा आवेदन दिनेहरुले अहिले डेढवर्षमै एसाइलमको अन्तरवार्ताको मिति पाइरहदा न्युजर्सीमा आवेदन दिनेहरुले भने साढे २ वर्षसम्म कुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यद्यपी न्युजर्सीमा एसाइलमको ब्याकलग विस्तारै कम गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ । किनभने सन् २०१२ को डिसेम्बरमा आवेदन दिएकाहरुको सन् २०१५ को अप्रिलमा अन्तरवार्ता गरिएको थियो भने सन् २०१५ को मे सम्ममा सन् २०१३ को जनवरीदेखि मार्चसम्मको ब्याकलग हटाइयो । न्युजर्सी नेवार्कको न्यायिक क्षेत्रभित्र कनेक्टिकट, डेलावर, मैन, मासाचुसेट्स, न्यु ह्याम्पशायर, न्युजर्सी, न्युयोर्कको अल्बानी, बफेलो, म्यानहटन र ब्रोंक्स, पेन्सिलभेनियाको पिट्सबर्ग बाहेकको क्षेत्र, रोढ आइल्याण्ड र भर्मोन्ट पर्दछन् ।
फ्लोरिडामा भने सन् २०१३ को मेमा एसाइलमका आवेदन दिएकाहरुको अन्तरवार्ता सन् २०१६ को जनवरीमा गरिएको छ । फ्लोरिडामा अहिले सन् २०१३ को जुनमहिनामा एसाइलम आवेदन दिनेहरुलाई अन्तरवार्तामा बोलाउन प्रयास भइरहेको छ । तर अत्याधिक चापका कारण फ्लोरिडामा ब्याकलग कम गर्न हम्मे हम्मे भइरहेको छ । मायामीको न्यायिक क्षेत्रभित्र फ्लोरिडा, पोर्तोरिको र भर्जिन आइल्याण्ड पर्दछन् ।
यहाँनेर न्युयोर्कबाट एसाइलमका लागि आवेदन दिनेहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि न्युयोर्कको आवेदक अल्बानी, बफेलो, म्यानहटन र बोंक्समा बस्दै आएका छन् भने उनीहरुको आवेदन न्युजर्सीको न्यायिक क्षेत्रभित्र पर्न जानेछ । तर क्वीन्स, बुर्कलिन लगायत अन्य क्षेत्रमा बस्नेहरुको आवेदनमात्र न्युयोर्कको न्यायिक क्षेत्रभित्र पर्नेछ ।
छिटो फैसला चाहिनेले कहाँ आवेदन दिने ?
यदि कुनै एसाइलमको आवेदकले युएससीआईएसबाट छिटो निर्णय चाहन्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिले न्युयोर्कमा एसाइलमका लागि आवेदन दिनु उपयुक्त हुन्छ । किनभने अहिले सबै क्षेत्रको तुलनामा न्युयोर्कमा एसाइलमका लागि अन्तरवार्ताको मिति सबैभन्दा छिटो अर्थात् डेढ वर्षमा नै आउने गरेको छ । तर न्युयोर्कको न्यायिक क्षेत्रले हेर्नेगरी एसाइलमको आवेदन दिनका लागि आवेदक न्युयोर्कको राज्यको अल्बानी, बफेलो, म्यानहटन र ब्रोंक्स बाहेकको क्षेत्रमा बसोबास गरेको हुनुपर्छ । त्यसपछि ह्युस्टन टेक्सासको न्यायिक क्षेत्रमा पर्ने आवेदकले एसाइलम अन्तरवार्ताको मिति छिटो पाइरहेका छन् । तर हयुस्टनको न्यायिक क्षेत्रभित्र पर्नका लागि आवेदक अर्कान्सास, कोलोराडो, लुजियाना, मिसिसिपी, न्यु मेक्सिको, ओक्लाहोमा, टेनिसी, युटाह र वायोमिंगमा बसोबास गरिरहेको हुनुपर्छ । तेश्रोमा क्यालिफोर्नियाको सान फ्रान्सिस्कोको न्यायिक क्षेत्रभित्र पर्ने आवेदकले एसाइलमको अन्तरवार्ताको मिति छिटो पाइरहेका छन् । तर यस न्यायिक क्षेत्रमा पर्नका लागि आवेदक अलास्का, नर्दन क्यालिफोर्निया, नेभाडाको रेनो , ओरेगन र वासिंटनमा बसोबास गरिरहेको हुनुपर्छ । छिटो अन्तरवार्ताको मिति चाहने र छिटो फैसला चाहने व्यक्तिले क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलसको न्यायिक क्षेत्रबाट एसाइलमका लागि आवेदन दिनु उपयुक्त छैन । किनभने यस न्यायिक क्षेत्रभित्र पर्ने एरिजोना, साउथ क्यालिफोर्निया, गुआम, हवाई र नेभाडाको लस भेगासका एसाइलम आवेदकहरुले चारवर्षदेखि अन्तरवार्ताको मिति पाइरहेका छैनन् ।
तीन वर्ष कुरेपछि मास्टर हेयरिङको मिति
एसाइलमको आवेदन दिएकाहरुको प्रारम्भिक अन्तरवार्ताको मिति आउनमा मात्र होइन, एसाइलम अस्वीकृत भएमा अदालतमा उपस्थीत हुने मिति थाहा पाउन समेत दुईदेखि तीनवर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था भएकोमा त्यस्तो अवस्थामा पनि युएससीआईएसले सुधार गरेको छ ।
युएससीआईएसको एसाइलम डिभिजनबाट एसाइलमको आवेदन अस्वीकृत भएमा अस्वीकृत भएको निर्णय दिंदा पहिलेपहिले अदालतमा उपस्थीत हुने मिति समेत तोकेर दिने गरिएको थियो । तर केही वर्षयता अदालतमा उपस्थीत हुने मिति अदालतले नै तोक्ने भन्दै एसाइलम अस्वीकृतको निर्णय दिने गरिएको थियो । अदालतले नै तोक्ने भनिएको मितिबारे जानकारी पाउनमात्र पनि दुईदेखि तीनवर्षसम्म समेत कुर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
दुईदेखि तीनवर्षसम्म कुरेपछि अदालतले अर्को डेढदेखि तीनवर्षभित्र मास्टर हेयरिङको मिति दिने गर्दै आएको थियो । यसरी एसाइलको आवेदन युएससीआइएसबाट अस्वीकृत भएमा अदालतको मास्टर हेयरिङमा उपस्थीत हुनमात्र चारपाँचवर्ष लाग्ने गरेको थियो । तर अहिले भने मास्टर हेयरिङको मिति नतोकिएका तर एसाइलम अस्वीकृत भएको निर्णय दिइएकाहरुलाई धमाधम मास्टर हेयरिङको मिति समेत दिन थालिएको छ । अमेरिकी सरकारको होमल्याण्ड सेक्युरिटी अन्तरगत युएससीआईएसले एसाइलम सम्बन्धि आफ्नो प्रकृयामा केही चुस्तता ल्याएपनि अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस अन्तरगतका इमिग्रेशन अदालतमा हुने ढिला सुस्तीका कारण युएससीआईएसबाट अदालतमा गएका केसहरुका सन्दर्भमा भने आवेदकहरुले फैसला पाउनका लागि वर्षौ कुर्नुपर्ने बाध्यता घटेको छैन, बरु बढेको छ ।
११ फाल्गुन २०७२, मंगलवार २२:३९ मा प्रकाशित